ကလေးမြို့က ကိုဗစ်လူနာတဦးကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦးက အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တပ်ဆင်ပေးနေပုံ၊ ဂျူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၁။
ဒီတပတ်တော့ အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်း ဆေးပညာရှင် ဒေါက်တာတင့်ဆွေကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း နဲ့ ကိုဗစ်လူနာ
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။ “ကျနော်တို့ အကုန်လုံးဟာ လေထဲမှာတဲ့ အောက်ဆီဂျင် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ ပုံမှန်လေကိုပဲ ရှုကြတာဟာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အလွန်ပဲ အရေးကြီးတယ်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက် များသွားရင် အသက်ကိုပါ ရန်ရှာနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီလို အောက်ဆီဂျင်လေထဲမှာ ရှုတဲ့ထဲမှာ များတာကို ကျနော်တို့ Hyperoxia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့် အဆိပ်သင့်လို့ရှိရင် Oxygen toxicity ဒါမှမဟုတ် oxygen poisoning လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်ချေ ကလည်း မတူဘူးခင်ဗျ။ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
တခုကတော့ ဒီအောက်ဆီဂျင်ကို ပုံမှန် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါတဲ့ လေမဟုတ်ပဲနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို များအောင်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ ဆေးပညာအသုံးဆို concentrate ပေါ့။ အဲဒါကို များအောင် လုပ်ပြီးတော့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ရှုမိလို့ ရှိရင်လည်း အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း တမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အဆိပ်သင့်ရင် သူက ချက်ချင်း ဖြစ်တယ်။ နာရီပိုင်း အတွင်း ဖြစ်တယ်။ နောက်တခါ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါက ဖြစ်နိုင်ခြေ နံပါတ် ၁ ပေါ့နော်။ နောက် ဖြစ်နိုင်ခြေ နံပါတ် ၂ ကတော့ ခုနလောက် မများတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို လိုတာထက် ပိုတော့ပိုမယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာကြာကြီး ရှုနေလို့ ရှိရင် နာတာရှည် အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ရင်တော့ သူက အဆုတ်ကို သက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ မျိုးစလုံးဟာ ဆိုးလို့ရှိရင်တော့ အသက်အန္တရာယ် အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ”
မေး။. ။ “ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာ အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်တာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ”
ဖြေ။ ။ “အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်ခြင်းက ဖြစ်နိုင်တဲ့ လူ ၃ မျိုးရှိတယ် ခင်ဗျ။ ပထမတမျိုးကတော့ အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေ ပေါ့နော်။ သူတို့ကို အောက်ဆီဂျင် ပေးရတဲ့ လူနာပေါ့နော်။ ဆေးသံနဲ့ပြောရင် hyperbaric oxygen therapy လို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ပေးပြီး ကုသရတဲ့ လူနာတွေ။ သူတို့မှာလည်း အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြတ်တတ်တယ်။
နောက်တခုက ဆေးရုံတွေမှာ လမစေ့ပဲ မွေးတဲ့ကလေးတွေ၊ ပေါင်ချိန်လျော့ပြီး မွေးတဲ့ကလေးတွေကို အောက်ဆီဂျင် ပေးရပါတယ်။ အဲဒီကလေးတွေမှာလည်း သတ်မှတ် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ မညီဘူး ဆိုရင် အဆိပ်သင့်ဖြစ်တယ်။ နံပါတ် ၃ အမျိုးအစားကတော့ အောက်ဆီဂျင်ဘူးကို ကျောမှာတင်ပြီးတော့ ရေငုပ်တဲ့ ရေငုပ်သမားတွေပေါ့။ အဲဒီ ၃ မျိုးမှာ အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့အခါမှ အယ်လ်ဗီယိုလိုင် ဆဲလ် အဖုံးလွှာ ကလေးတွေက ပျက်စီးကုန်တယ်။ ပျက်စီးပြီးတော့ အဲဒီမှာ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ယူ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် လူဟာ အောက်ဆီဂျင် ရလိုသလောက် မရတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ အောက်ဆီဂျင် မဝပါဘူး။ အဲဒီမှာ အရေးကြီးတာက ဦးနှောက်ပေါ့နော်။ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောမှာ အောက်ဆီဂျင် မဝတဲ့အခါမှာ လူနာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေ သက်ရောက်ပါတယ်။ ”
မေး။. ။“ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ရင် တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေပါလဲဆရာ။”
ဖြေ။. ။ “အဲဒီ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်လို့ ရှိရင် ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ။ စိတ်တိုတာ။ စိုးရိမ်တာ၊ ခေါင်းမူးတာာ။ နောက် သူဘယ်နေရာ ရောက်နေတယ်။ ဥပမာ ဆေးရုံရောက်နေတယ် ဆိုရင်လည်း ရောက်နေမှန်းတောင် မသိဘူးပေါ့။ တခါ သူရဲ့ အသက်ရှုနှုန်း ကလည်း သူများထက် ပုံမှန်ထက် အရင်ကထက် ပိုပြီးတော့ မြန်တယ်။ တချို့လူနာတွေ ဂျို့ထိုးတယ် ခင်ဗျ။ နောက် ချမ်းတယ်။ တုန်တယ်။ လူကလည်း အားမရှိ ဖြစ်တယ်။ ခြေတွေ လက်တွေလည်း ထုံကျဉ်တယ်။ မျက်စိကလည်း ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး။ နားကလည်း အူပြီးတော့ နားထဲမှာ အသံတွေကြား နောက် နားအကြား မကောင်းဘူး။ ပျို့တယ်။ လက်တွေ တုန်တာနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ တက်တယ် ပေါ့နော်။ ဝက်ရူးပြန်သလိုပေါ့၊ တက်တဲ့ဟာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။ ။ “အောက်ဆီဂျင် ကောင်းကောင်း မရဘူးဆိုရင် အဆုတ်ပိုင်းမှာ ဘယ်နေရာတွေကို ထိခိုက်ပါသလဲဆရာ။”
ဖြေ။ ။“ထိခိုက်တဲ့နေရာကတော့ အဆုတ်ထဲက အယ်လ်ဗီယိုလိုင် alveoli ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ထဲက သေးဆုံး လေအိတ်ကလေးတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးတယ်။ ယောင်တယ်။ အဲဒီမှာ အရည်တွေ ချွဲတွေ ပြည့်နေတာပေါ့။
အဲဒီလို ပြည့်နေရင် လူနာမှာဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရမလဲ ဆိုတော့ အသက်ရှုတဲ့အခါမှာ ခံစားမှု ပုံစံလေး ရှိတယ်ခင်ဗျ လူတိုင်းသိတယ်။ အဲဒီပုံစံက အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြောင်းလာတယ်။ နောက်တခါ အသက်ရှုတာကိုက ပူလောင်သလို ခံစားရတယ်။ နောက် ထိန်းလို့ကို မရနိုင်အောင် ချောင်း အဆက်မပြတ်ဆိုးတယ်။ တချို့ဆိုရင် ချောင်းဆိုးရင်း သွေးပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ချောင်းဆိုး သွေးပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက် လူနာက အသက်ရှု မဝဘူး။ ဘယ်လောက်ရှုရှု။ နောက် ကိုယ်ပူမယ်။ နှာခေါင်းမှာ ကြည့်လိုက်ရင် နှာခေါင်းကို ဖုံးထားတဲ့ အတွင်းအလွှာက ရဲနေတယ်။ သူ့ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်လို့ရှိရင် သူက pulmonary edema လို့ခေါ်တယ်။ edema ကတော့ ယောင်နေတာပေါ့နော်။ သူက အဆုတ်ယောင်နေတယ်။ နောက် နားကြပ်နဲ့ပဲ နားထောင်ရုံနဲ့ နားကြပ်ထဲမှာ အသက်ရှုတာ မတူတဲ့ အသံတွေ ကြားရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကတော့ အဆုတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။ ။“ ဒီလိုအောက်ဆီဂျင်အဆိပ်သင့်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေ့လာရင် အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လို လုပ်ပေးလို့ရပါလဲ။”
ဖြေ။. ။“လက္ခဏာက ၂ မျိုးပေါ့နော်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာနဲ့ အဆုတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေ တွေ့လို့ရှိရင် ဆရာဝန်က ချက်ချင်း ကုသရပါတယ်။ ဒါအရေးပေါ် ဖြစ်တယ် ခင်ဗျ။ အဆုတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆိုရင် ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာကို လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ ကုသပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကုသနည်းမှာ ပထမဦးဆုံးကတော့ ပေးနေတဲ့ ပုံမှန်ထက် များအောင် လုပ်ထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို လျှော့ချရပါမယ်။ ချက်ချင်း ဗြုံးစားကြီးတော့ ရပ်တာ မသင့်ဘူး၊ flow rate လို့ခေါ်တဲ့ စီးဆင်းနှုန်းကို တမိနစ် ဘယ်နှစ်လီတာ ဆိုတာကို လျှော့ချရပါတယ်။ ကုသနည်း နောက် ဟာတွေ ကတော့ လူနာက ဘာခံစားရသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ြ့ပီး ကျနော်တို့ ပေးရပါတယ်။”
မေး။. ။“အခု ဆေးရုံတွေကိုလည်း မသွားနိုင်ကြဘူး။ ဆရာဝန်တွေနဲ့လည်း မတွေ့နိုင်ကြဘူးဆိုရင်၊ အိမ်မှာပဲ ကုသနေတဲ့ လူနာတွေ အတွက်ရော အရေးပေါ် ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။”
ဖြေ။. ။“၈၀ % လူနာတွေက အိမ်မှာပဲ နေကြရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့ အဲဒီထက်မက လူနာတွေက ဆေးရုံလည်း မသွားနိုင်၊ ဆေးရုံတွေကလည်း လက်မခံ၊ စသဖြင့် အကြောင်းကြောင်း တွေကြောင့် အိမ်မှာ နေကြရတဲ့ သူ ရာခိုင်နှုန်းက ပိုများတယ်။ အိမ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက်က မြန်မာပြည်အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။
ကူးစက်ပြီ ဆိုကတည်းက အိမ်မှာ သီးခြားနေထိုင်ခြင်း စည်းကမ်း၊ သန့်ရှင်းရေး စည်းကမ်းနဲ့ ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်း ဒီ ၃ မျိုးကို ရာနှုန်းပြည့်လိုက်နာ ကြရပါမယ်။ တခါ အောက်ဆီဂျင် သိပ်နည်းသွားတဲ့ တော်တော်နည်းတဲ့ လူနာ၊ များတဲ့လူနာ တွေ ဆိုရင် ဆေးရုံကြမှပဲ ရတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာတင် အောက်ဆီဂျင် ပေးနေရုံနဲ့ မပျောက်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကို သိရပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျနော် သိရသလောက် အောက်ဆီဂျင် ဆလင်ဒါတွေ၊ အောက်ဆီဂျင် concentrator တွေ၊ အဲဒီစက်ကို ဝယ်ပြီး သုံးတဲ့အခါ စက်တွေ သုံးလို့ရှိရင် အညွှန်းပါပါတယ်။ အဲဒီ အညွှန်းထက် မပိုဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။ စက်ကလည်း အမျိုးအစား ကောင်းရမယ့် ပေးတဲ့နှုန်းကလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးဖို့ လိုပါတယ်။”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ဒီတပတျတော့ အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့တဲ့ အကွောငျး ဆေးပညာရှငျ ဒေါကျတာတငျ့ဆှကေို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။. ။ “ကနြျောတို့ အကုနျလုံးဟာ လထေဲမှာတဲ့ အောကျဆီဂငျြ ၂၁ ရာခိုငျနှုနျးပါတဲ့ ပုံမှနျလကေိုပဲ ရှုကွတာဟာ အသကျရှငျဖို့အတှကျ အလှနျပဲ အရေးကွီးတယျ။ အလှနျကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လိုတာထကျ မြားသှားရငျ အသကျကိုပါ ရနျရှာနိုငျပါတယျ ။ အဲဒီလို အောကျဆီဂငျြလထေဲမှာ ရှုတဲ့ထဲမှာ မြားတာကို ကနြျောတို့ Hyperoxia လို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီကနေ တဆငျ့ အဆိပျသငျ့လို့ရှိရငျ Oxygen toxicity ဒါမှမဟုတျ oxygen poisoning လို့ ချေါပါတယျ။ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို ဖွဈနိုငျခြေ ကလညျး မတူဘူးခငျဗြ။ ၂ မြိုးရှိပါတယျ။
တခုကတော့ ဒီအောကျဆီဂငျြကို ပုံမှနျ ၂၁ ရာခိုငျနှုနျး ပါတဲ့ လမေဟုတျပဲနဲ့ အောကျဆီဂငျြကို မြားအောငျပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ ဆေးပညာအသုံးဆို concentrate ပေါ့။ အဲဒါကို မြားအောငျ လုပျပွီးတော့ အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ ရှုမိလို့ ရှိရငျလညျး အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့ခွငျး တမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို အဆိပျသငျ့ရငျ သူက ခကျြခငျြး ဖွဈတယျ။ နာရီပိုငျး အတှငျး ဖွဈတယျ။ နောကျတခါ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောကို ထိခိုကျပါတယျ။ ဒါက ဖွဈနိုငျခွေ နံပါတျ ၁ ပေါ့နျော။ နောကျ ဖွဈနိုငျခွေ နံပါတျ ၂ ကတော့ ခုနလောကျ မမြားတဲ့ အောကျဆီဂငျြကို လိုတာထကျ ပိုတော့ပိုမယျပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျကွာကွာကွီး ရှုနလေို့ ရှိရငျ နာတာရှညျ အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို ဖွဈရငျတော့ သူက အဆုတျကို သကျရောကျပါတယျခငျဗြ။ အဲဒီတော့ ဒီဖွဈနိုငျခွေ ၂ မြိုးစလုံးဟာ ဆိုးလို့ရှိရငျတော့ အသကျအန်တရာယျ အထိ ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။ ”
မေး။. ။ “ဘယျလိုလူမြိုးတှမှော အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့တာ ဖွဈတတျပါသလဲ။ ”
ဖွေ။ ။ “အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့ခွငျးက ဖွဈနိုငျတဲ့ လူ ၃ မြိုးရှိတယျ ခငျဗြ။ ပထမတမြိုးကတော့ အခုဆှေးနှေးနတေဲ့ ကိုဗဈလူနာတှေ ပေါ့နျော။ သူတို့ကို အောကျဆီဂငျြ ပေးရတဲ့ လူနာပေါ့နျော။ ဆေးသံနဲ့ပွောရငျ hyperbaric oxygen therapy လို့ ချေါပါတယျခငျဗြ။ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ အောကျဆီဂငျြကို ပေးပွီး ကုသရတဲ့ လူနာတှေ။ သူတို့မှာလညျး အဆိပျသငျ့ခွငျး ဖွတျတတျတယျ။
နောကျတခုက ဆေးရုံတှမှော လမစပေဲ့ မှေးတဲ့ကလေးတှေ၊ ပေါငျခြိနျလြော့ပွီး မှေးတဲ့ကလေးတှကေို အောကျဆီဂငျြ ပေးရပါတယျ။ အဲဒီကလေးတှမှောလညျး သတျမှတျ ညှနျကွားခကျြနဲ့ မညီဘူး ဆိုရငျ အဆိပျသငျ့ဖွဈတယျ။ နံပါတျ ၃ အမြိုးအစားကတော့ အောကျဆီဂငျြဘူးကို ကြောမှာတငျပွီးတော့ ရငေုပျတဲ့ ရငေုပျသမားတှပေေါ့။ အဲဒီ ၃ မြိုးမှာ အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ဖွဈတဲ့အခါမှ အယျလျဗီယိုလိုငျ ဆဲလျ အဖုံးလှာ ကလေးတှကေ ပကျြစီးကုနျတယျ။ ပကျြစီးပွီးတော့ အဲဒီမှာ သူအလုပျလုပျတဲ့ အောကျဆီဂငျြယူ။ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျ ထုတျတဲ့ အလုပျကို မလုပျနိုငျတော့ဘူး။ မလုပျနိုငျတဲ့အတှကျ လူဟာ အောကျဆီဂငျြ ရလိုသလောကျ မရတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျမှာ အရေးကွီးတဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှေ အောကျဆီဂငျြ မဝပါဘူး။ အဲဒီမှာ အရေးကွီးတာက ဦးနှောကျပေါ့နျော။ ဦးနှောကျနဲ့အာရုံကွောမှာ အောကျဆီဂငျြ မဝတဲ့အခါမှာ လူနာဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဦးနှောကျပိုငျး ဆိုငျရာ လက်ခဏာတှေ သကျရောကျပါတယျ။ ”
မေး။. ။“ဦးနှောကျပိုငျးဆိုငျရာ ထိခိုကျရငျ တှရေ့တဲ့ လက်ခဏာတှကေ ဘာတှပေါလဲဆရာ။”
ဖွေ။. ။ “အဲဒီ လက်ခဏာတှကေတော့ အောကျဆီဂငျြ အဆိပျသငျ့လို့ ရှိရငျ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျတာ။ စိတျတိုတာ။ စိုးရိမျတာ၊ ခေါငျးမူးတာာ။ နောကျ သူဘယျနရော ရောကျနတေယျ။ ဥပမာ ဆေးရုံရောကျနတေယျ ဆိုရငျလညျး ရောကျနမှေနျးတောငျ မသိဘူးပေါ့။ တခါ သူရဲ့ အသကျရှုနှုနျး ကလညျး သူမြားထကျ ပုံမှနျထကျ အရငျကထကျ ပိုပွီးတော့ မွနျတယျ။ တခြို့လူနာတှေ ဂြို့ထိုးတယျ ခငျဗြ။ နောကျ ခမျြးတယျ။ တုနျတယျ။ လူကလညျး အားမရှိ ဖွဈတယျ။ ခွတှေေ လကျတှလေညျး ထုံကဉျြတယျ။ မကျြစိကလညျး ကွညျ့လို့ မကောငျးဘူး။ နားကလညျး အူပွီးတော့ နားထဲမှာ အသံတှကွေား နောကျ နားအကွား မကောငျးဘူး။ ပြို့တယျ။ လကျတှေ တုနျတာနဲ့ နောကျဆုံးမှာ တကျတယျ ပေါ့နျော။ ဝကျရူးပွနျသလိုပေါ့၊ တကျတဲ့ဟာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျခငျဗြ။”
မေး။ ။ “အောကျဆီဂငျြ ကောငျးကောငျး မရဘူးဆိုရငျ အဆုတျပိုငျးမှာ ဘယျနရောတှကေို ထိခိုကျပါသလဲဆရာ။”
ဖွေ။ ။“ထိခိုကျတဲ့နရောကတော့ အဆုတျထဲက အယျလျဗီယိုလိုငျ alveoli ချေါတဲ့ အဆုတျထဲက သေးဆုံး လအေိတျကလေးတှမှော ဖွဈပါတယျ။ ပကျြစီးတယျ။ ယောငျတယျ။ အဲဒီမှာ အရညျတှေ ခြှဲတှေ ပွညျ့နတောပေါ့။
အဲဒီလို ပွညျ့နရေငျ လူနာမှာဘယျလို လက်ခဏာတှေ ခံစားရမလဲ ဆိုတော့ အသကျရှုတဲ့အခါမှာ ခံစားမှု ပုံစံလေး ရှိတယျခငျဗြ လူတိုငျးသိတယျ။ အဲဒီပုံစံက အရငျလို မဟုတျတော့ဘူး။ ပွောငျးလာတယျ။ နောကျတခါ အသကျရှုတာကိုက ပူလောငျသလို ခံစားရတယျ။ နောကျ ထိနျးလို့ကို မရနိုငျအောငျ ခြောငျး အဆကျမပွတျဆိုးတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ ခြောငျးဆိုးရငျး သှေးပါတယျ။ ကိုဗဈကွောငျ့ ခြောငျးဆိုး သှေးပါ ဖွဈနိုငျတယျ။ နောကျ လူနာက အသကျရှု မဝဘူး။ ဘယျလောကျရှုရှု။ နောကျ ကိုယျပူမယျ။ နှာခေါငျးမှာ ကွညျ့လိုကျရငျ နှာခေါငျးကို ဖုံးထားတဲ့ အတှငျးအလှာက ရဲနတေယျ။ သူ့ကို ဓါတျမှနျရိုကျလို့ရှိရငျ သူက pulmonary edema လို့ချေါတယျ။ edema ကတော့ ယောငျနတောပေါ့နျော။ သူက အဆုတျယောငျနတေယျ။ နောကျ နားကွပျနဲ့ပဲ နားထောငျရုံနဲ့ နားကွပျထဲမှာ အသကျရှုတာ မတူတဲ့ အသံတှေ ကွားရပါတယျခငျဗြ။ ဒါကတော့ အဆုတျပိုငျး ဆိုငျရာ သကျရောကျမှု ဖွဈပါတယျ။”
မေး။ ။“ ဒီလိုအောကျဆီဂငျြအဆိပျသငျ့တဲ့ လက်ခဏာမြိုးတှလေ့ာရငျ အဆငျပွအေောငျ ဘယျလို လုပျပေးလို့ရပါလဲ။”
ဖွေ။. ။“လက်ခဏာက ၂ မြိုးပေါ့နျော။ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောဆိုငျရာနဲ့ အဆုတျပိုငျး ဆိုငျရာ လက်ခဏာတှေ တှလေို့ရှိရငျ ဆရာဝနျက ခကျြခငျြး ကုသရပါတယျ။ ဒါအရေးပျေါ ဖွဈတယျ ခငျဗြ။ အဆုတျပိုငျး ဆိုငျရာ ဆိုရငျ ၂၄ နာရီ အတှငျးမှာကို လက်ခဏာတှေ ပျေါပါတယျ။ အဲဒီတော့ ၂၄ နာရီ အတှငျးမှာ ကုသပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ကုသနညျးမှာ ပထမဦးဆုံးကတော့ ပေးနတေဲ့ ပုံမှနျထကျ မြားအောငျ လုပျထားတဲ့ အောကျဆီဂငျြကို လေြှာ့ခရြပါမယျ။ ခကျြခငျြး ဗွုံးစားကွီးတော့ ရပျတာ မသငျ့ဘူး၊ flow rate လို့ချေါတဲ့ စီးဆငျးနှုနျးကို တမိနဈ ဘယျနှဈလီတာ ဆိုတာကို လေြှာ့ခရြပါတယျ။ ကုသနညျး နောကျ ဟာတှေ ကတော့ လူနာက ဘာခံစားရသလဲ ဆိုတဲ့ အခကျြလကျတှပေျေါမူတညျွ့ပီး ကနြျောတို့ ပေးရပါတယျ။”
မေး။. ။“အခု ဆေးရုံတှကေိုလညျး မသှားနိုငျကွဘူး။ ဆရာဝနျတှနေဲ့လညျး မတှနေို့ငျကွဘူးဆိုရငျ၊ အိမျမှာပဲ ကုသနတေဲ့ လူနာတှေ အတှကျရော အရေးပျေါ ဘာတှေ လုပျသငျ့တယျ ဆိုတာ ပွောပွပေးပါ။”
ဖွေ။. ။“၈၀ % လူနာတှကေ အိမျမှာပဲ နကွေရပါတယျ။ မွနျမာပွညျဆိုရငျတော့ အဲဒီထကျမက လူနာတှကေ ဆေးရုံလညျး မသှားနိုငျ၊ ဆေးရုံတှကေလညျး လကျမခံ၊ စသဖွငျ့ အကွောငျးကွောငျး တှကွေောငျ့ အိမျမှာ နကွေရတဲ့ သူ ရာခိုငျနှုနျးက ပိုမြားတယျ။ အိမျမှာ ဘယျလိုလုပျရမလဲ ဆိုတဲ့ အခကျြက မွနျမာပွညျအတှကျ အငျမတနျမှ အရေးကွီးပါတယျ။
ကူးစကျပွီ ဆိုကတညျးက အိမျမှာ သီးခွားနထေိုငျခွငျး စညျးကမျး၊ သနျ့ရှငျးရေး စညျးကမျးနဲ့ ကာကှယျရေး စညျးကမျး ဒီ ၃ မြိုးကို ရာနှုနျးပွညျ့လိုကျနာ ကွရပါမယျ။ တခါ အောကျဆီဂငျြ သိပျနညျးသှားတဲ့ တျောတျောနညျးတဲ့ လူနာ၊ မြားတဲ့လူနာ တှေ ဆိုရငျ ဆေးရုံကွမှပဲ ရတော့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အိမျမှာတငျ အောကျဆီဂငျြ ပေးနရေုံနဲ့ မပြောကျနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ အခကျြကို သိရပါမယျ။ မွနျမာပွညျမှာ ကနြျော သိရသလောကျ အောကျဆီဂငျြ ဆလငျဒါတှေ၊ အောကျဆီဂငျြ concentrator တှေ၊ အဲဒီစကျကို ဝယျပွီး သုံးတဲ့အခါ စကျတှေ သုံးလို့ရှိရငျ အညှနျးပါပါတယျ။ အဲဒီ အညှနျးထကျ မပိုဖို့ အငျမတနျ အရေးကွီးတယျ။ စကျကလညျး အမြိုးအစား ကောငျးရမယျ့ ပေးတဲ့နှုနျးကလညျး မှနျမှနျကနျကနျ ပေးဖို့ လိုပါတယျ။”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှရေဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။